M/Jeneraal Kinfee Daanyaaw ofii abukaatoo akka qacaratan murtaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Getachew Aregawi
Yakka malaammaltummaa cimaan shakkamanii kan qabaman direektarri olaanaa duraanii 'METEC' Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaaw guyyaa lammataaf mana murtiitti dhiyaataniiru.
Obboleessa isanii Obbo Isaayaas Daanyaaw walin mana murtii federaalaa damee Lidataa dhaddacha yakkaa 10ffaatti kan dhiyaatan, meejar Jeneraal Kinfeen, kaleessa mindaan isaanii xiqqoo ta'uu himuun manni murtii abukaatoo akka dhaabuuf gaafatanii turan.
Komishinii farra malaammaltummaa federaalaa irraa manni maqaa isaaniitin galmaa'e akka jiru, baankii keessaas maallaqa akka qaban fi guyyaattis maallaqa guddaa herreega isaanii keessaatti sochoosaa akka turan ragaa nan qaba jechuun abukaatoon mootummaan ramadameef akka ka'u poolisiin federaalaa gaafateera.
Poolisiin federaalaa herreega baankii shakkamaa keessaa guyyoota 15 keessatti maallaqni 100,000 socho'uusaaf ragaa dhiyeeseera.
M/J Kinfee Daanyaaw gama isaaniitin "manas ta'e konkolaataa hin qabu" jechuun mormaniiru.
Poolisii federaalaatti waajjiri qorannoo yakkaa M/J Kinfee aksiyoonoota maqaa isaaniitin galmaa'e akka qabanis himeera.
Mormii lamaanii kan dhagahe manni murtichaa M/J Kinfee Daanyaaw abukaatoo ofiif akka qacaratan yookin ofiif akka mormatan ajajeera.
Kana malees hogganaan METEC duraanii M/J Kinfee Daanyaaw gaafii maattiin isaanii akka isaan gaafatan akka eyyamamuuf dhiyeessan fudhachuun manni murtichaa Sadaasa 10 bara 2011'f beellama qabateera.
Gama biraatiin manni murtichaa hojjetoota tika biyyaalessaa waliin ta'uun namoota shororkeessummaan shakkaman manneen hidhaa dhokatoo fi seera qabeessa hin taane keessatti akka dararaman taasiseera kan jedhame saajin Kidaane Asaffaa fi barattoota yunivarsiitii mirga isaanii gaafatan balbala duratti eegun ukkaamsuun akka dararaman taasisaa ture kan jedhame shakkamaa Saamu'el mirga wabii erga dhorkee booda dhimma isaanii ilaaluuf sadaasa 14'tti beelama qabateera.
Shakkamaa Saamu'el ragaalee sanadaa sobaa maqaa shororkeesummaan qindeessuun namoota sodaachisaa eyyama mana murtii malee namoota qabaa akka ture poolisiin mana murtiitti himeera.
Naannoon Amhaaraa, Tigraay gaaffii yoo qabaate karaa seeraan dhiyeessuu qaba jedhe
UN loltoota lammiilee Tigraay ajjeesan irratti qorannoo hatattamaan eegaluu qaba-HRW